Uhlaka.io luphakamisa uchungechunge olungu- $ 50M lokuvuselela ukusebenzisana kwevidiyo | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Uhlaka.io luphakamisa uchungechunge olungu- $ 50M C ukuze iphinde ibuyele ukusebenzisana kwevidiyo
Uhlaka.io luphakamisa uchungechunge olungu- $ 50M C ukuze iphinde ibuyele ukusebenzisana kwevidiyo
New York City, NY - Novemba 25, 2019 - I-Frame.io, ukubuyekezwa kwevidiyo okuhamba phambili kanye nenkundla yokusebenzisana esetshenziswa ngabenzi bamabhayisikobho abangaphezu kwesigidi esisodwa nabezindaba, namhlanje kumemezele ukuthi iphakamisile $ 50 million Series C round ukusiza ukusekela i-push yayo enkulu elandelayo ekuhambeni kokusebenza kwesithombe esisebenza efwini. U-Frame.io uzosebenzisa futhi le nxanxathela yezimali ukuze aqhubeke nokutshalwa kwezimali ngokujulile ekuvikelekeni kwe-airtight, i-UX enembile, kanye nobuchwepheshe bekamelo lekhamera. Abalingani be-Insight uhole umjikelezo ngeminikelo evela kubo bonke ababambe iqhaza ababekhona, kufaka phakathi i-Accel, iFirstMark, iSignalFire, kanye neShasta Ventures. U-Itai Tsiddon, umsunguli we Izikhanyisi, izomela i-Insight Partners njengelungu lebhodi elisha kakhulu le-Frame.io.
“Sijabule kakhulu ngokusebenzisana ne-Insight kulo mzuliswano olandelayo wezimali. Abakwa-Insight bayiqonda kahle indawo yokuqamba nokushintshwa kwamagagasi imakethe yamafilimu nama-video eminyakeni eminingi ezayo, ”kusho u-Emery Wells, umsunguli osebenzayo kanye ne-CEO ye-Frame.io. "I-2019 ibingunyaka wokukhula okukhulu kanye nezingqophamlando kithi: sigubha ukufinyelela kubasebenzi be100, sangena ekomkhulu elisha laseManhattan, futhi muva nje, samukele isikhulu sezimboni uMichael Cioni eqenjini. Silungiselela ukudala indlela entsha yokuqhamuka nokusebenza kwevidiyo kusukela kwavela i-digital 20 edlule. "
Idizayinelwe futhi yakhiwe ngabadali bevidiyo — yabakhi bamavidiyo — futhi yethulwe nge-2014, i-Frame.io isiqalo esisekelwe eNew York City esizinikezele Ukuguqula indlela ukudala ividiyo kusebenza ngayo. Ipulatifomu esekwe kuwebhu ihlangana ngaphandle komthungo nama-NLE okuholela embonini, kufaka phakathi i-Adobe® Premiere® Pro, Avid, I-Apple® Final Cut Pro® ne-DaVinci Resolve Studio, enika amandla abakhi bamavidiyo ukuthi balayishe futhi bahlele abezindaba futhi babelane ngamaphrojekthi ngaphakathi noma namakhasimende noma kuphi emhlabeni. Lo mjikelezo wezezimali we-Series C uletha imali ephelele yeFrey.io kuze kube manje ibe yizigidi ezingama- $ 82.2.
"Uhlaka.io lisesimweni esihle sokuxazulula ezinye zezidingo ezinkulu zomkhakha futhi luye laletha umkhiqizo ongayisebenzisisi," kusho uJeff Lieberman, uMqondisi oMqondisi kwa-Insight Partners. “Sijabule kakhulu ukuhola uchungechunge C lwabo futhi siyaziqhenya ngokusebenzisana nenkampani esikholwa ukuthi izosiza ukuphayona ushintsho olukhulu olulandelayo Hollywood nangale kwalokho. ”
I-Frame.io isuselwa kunqubo-yomkhiqizo yokuqala, egxile ekwakheni ithuluzi amakhasimende athanda ukulisebenzisa. Njengoba lochwepheshe ukukhiqiza ifilimu Inqubo isenziwe izinguquko ezibalulekile, iFart.io ivele umkhiqizo wayo ukuze ibhekane nezidingo zokwenza i-agility nejubane ekukhiqizeni ividiyo. Ngokuxhaswa ngemali kwe-Series C, i-Frame.io izophinda kabili umkhiqizo wayo, idizayini, namaqembu wobunjiniyela ukwandisa kulezo zingxenye ezibalulekile. Imizamo yezokuphepha, ehlala iphakathi kwamodeli yabo yebhizinisi, izohlala igxilwe ngokuyinhloko emzameni oqhubekayo wokwenza i-Frame.io the ipulatifomu ethembekile kunazo zonke embonini.
Kuyaphawuleka futhi ekuphakamiseni ukuthuthukisa ukuhamba komsebenzi okusekelwe efwini kwezithombe ezinyakazayo nakuthelevishini ukuqokwa kwakamuva UMichael Cioni njengeGlobal SVP ye-Innovation. ICioni izokwengamela umzamo we-camera-to-Cloud kusuka ekuvuleni kwehhovisi elisha le-Frame.io e-Los Angeles ku-2020, okuzovumela inkampani ukuthi isebenze kangcono i HollywoodUmphakathi wokukhiqiza osekelwe.
Selokhu yaqala, iFart.io ibe yingxenye yokuhamba komsebenzi kwamakhasimende amakhulu afana neVice Media, BuzzFeed, Facebook, ne-Turner Broadcasting, ebasiza ukuba bakwazi ukusebenza kahle ngamaphesenti we-60. Amakhasimende we-Frame.io angamaphesenti we-41 angakwazi ukushaya isikhathi esikhishwe yiprojekthi, ngamaphesenti we-39 amavidiyo amaningi akhiqizwa njalo ngenyanga ngokwesilinganiso, okuholela ekugcinweni kwezindleko eziphakeme nokwenyuka kwemali engenayo.
Njengoba ukudalwa kwamavidiyo kuwo wonke amabhizinisi kuqhubeka ukunwebeka, i-Frame.io ilungele ukufaka usimende indawo yayo njengomholi wezimboni. UWells uthe, "Ishumi leminyaka elizayo lizovula amathuba amahle kunoma ngubani okulungele futhi ozimisele ukusebenzisa ithuba lokuphuma kwevidiyo entsha. Uhlaka.io wazalwa ngaphandle kwangempela ukukhiqiza ifilimu I-DNA eyixhumanisa ngokweqiniso nezidingo zomkhakha. Futhi sisungula izindlela zokuxazulula izinselelo ezinkulu zokuhamba komsebenzi esesiphile ngazo futhi sazi ukuthi abenzi befilimu babhekana nazo nsuku zonke. ”
Landa: Uhlaka lwe-.U Series C Funding Press Kit
Cela Ukubhidlizwa Okuphezulu nge-Frame.io
Ukucela isithangami sabezindaba sesigungu esiphezulu ne-Emery Wells noma noMichael Cioni, sicela uxhumane noMegan Linebarger ku- [Email protected].
I-Frame.io yisiteji sokusebenzisana samavidiyo asuselwa emhlabeni samafu, esenzelwe ukuhlehlisa inqubo yokwenziwa kwamavidiyo ngokufaka phakathi yonke impahla yabezindaba-nayo yonke impendulo-endaweni eyodwa evikelekile etholakala kalula kusuka kunoma yikuphi emhlabeni. Uhlaka.io luhlangana namathuluzi wevidiyo abaluleke kakhulu, asebenza njengezicubu ezithintekayo kuyo yonke i-video ecosystem, akukhathalekile ukuthi ngabe isisindo sinjani. Yaziwa futhi yaklanywa ngabadali bevidiyo, i-UI inembile futhi ilula kubo bobabili ochwepheshe abanamakhono kakhulu namakhasimende angaphansi kobuchwepheshe ukuze basebenzise ukuqeqeshwa okuncane (noma akukho). Abadali nabaholi abaphambili emhlabeni bathembela ku-Frame.io nsuku zonke ukusiza amandla okusebenza kwevidiyo yabo, kufaka phakathi i-Turner Broadcasting, Disney, NASA, Snapchat, BBC, BuzzFeed, TED, Adobe, Udemy, Google, Fox Sports, Media Monks, Ogilvy ne-VICE Abezindaba.
Inhloso ye-Frame.io ukuvumela bonke abanikeli kanye nababambe iqhaza kwinqubo yokuqanjwa kwamavidiyo ukuthi bahlanganyele kungathi bonke basekamelweni linye, kungakhathalekile ukuthi bakuphi ngokomzimba, basheshise ukuhamba komsebenzi futhi basuse izithiyo ekubumbeni. Ukusuka kwiskripthi noma kubhodi yezindaba kuya kuma-dailies ekulethweni, uHlelo.io luchaza kabusha ukuhanjiswa kwevidiyo yesimanje.
Uhlaka.io lusekelwa yizimboni ezinamandla ezibandakanya i-Accel, i-FirstMark Capital, iSignalFire, kanye neShasta Ventures. I-Insight Partners isanda kuhola uchungechunge C lwayo lwama- $ 50M. Ukuze ufunde kabanzi sicela uvakashele ifreyimu.io. Bukela: Kuyini Uhlaka.io?
Mayelana nabalingani be-Insight
I-Insight Partners iyinhlangano ehola phambili yamasheya omhlaba jikelele kanye nokutshala imali yangasese eqinile ekutshaleni ubuchwepheshe obukhulu kanye nezinkampani zesoftware eziqhuba ushintsho olukhulu ezimbonini zabo. Kusungulwe i-1995, i-Insight njengamanje inezimpahla ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 20 ngaphansi kwezokuphatha futhi ifake imali ngokweqile ezinkampanini ezingaphezu kwe-300 emhlabeni jikelele. Umsebenzi wethu ukuthola, ukukhokhela, kanye nokusebenza ngempumelelo nabaphathi bemibono, ukubanikeza ubuchwepheshe obukhulayo bokukhulisa impumelelo yesikhathi eside. Ngaphesheya kwabantu bakithi nephothifoliyo yethu, sigqugquzela isiko elizungeze inkolelo eyisisekelo: ukukhula ngokulingana nethuba. Ngemininingwane engaphezulu kwe-Insight nakho konke ukutshala imali, vakashela www.insightpartners.com noma usilandele ku-Twitter @insightpartners.
Avid CES2017 kuqala ifreyimu.io I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-MStar Amaloli angaphandle asakaza SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo Ividiyo isebenza 2019-11-25
Ngaphambilini: Isiteshi 5 senza lula ukuhamba komsebenzi ngesakhiwo esisodwa